vhuraSUSE Tumbleweed yakagadzirira kurodha Rolling Release | Kubva kuLinux
vhuraSUSE Tumbleweed yakagadzirira kurodha Iyo Rolling Kuburitswa !!!
petercheco | | Kugoverwa
Mutsva wabuda vhuraSUSE 13.2, asi hazvisi izvo zvese izvo zvitsva nezve SUSE. Neichi kuvhurwa, iyo nyowani Kutenderera Kuburitswa kubva kuvhuraSUSE kufona Tumbleweed and the fekitari ichaenderera kuve distro yekuenderera mberi kuvhuraSUSE kuvandudza.
Ndekupi kwandinotora pasi kuvhuraSUSE Tumbleweed kubva?
Kubva pane iyi link yatinosiya pazasi:
Dhawunirodha vhuraSUSE Tumbleweed
Parizvino mufananidzo weFekitori uri kuramba uchionekwa muiyi link yakapihwa, asi mumazuva mashoma ichave ichiwanikwa pasi pezita Tumbleweed. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti avo vanoshandisa Fekitori vanogona kuenda ku Tumbleweed pasina kudzoreredza. Paunenge waiswa, iwe unofanirwa kushandura marekodhi (kana maisos matsva aonekwa, haachave anodikanwa).
Vhura terminal uye unomhanya semidzi:
mkdir /etc/zypp/repos.d/old mv /etc/zypp/repos.d/*.repo /etc/zypp/repos.d/old zypper ar -f -c http://download.opensuse.org/ tumbleweed / repo / oss repo-oss zypper ar -f -c http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/non-oss repo-non-oss zypper ar -f -c http: //download.opensuse. org / tumbleweed / repo / debug repo-debug zypper ar -f -d -c http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/src-oss repo-src-oss zypper ar -f -d -c http: //download.opensuse.org/tumbleweed/repo/src-non-oss repo-src-isiri-oss
Isu tinogadziridza iyo distro:
Uye takagadzirira :). Ivo vatove neTumbleweed yavo.
Mamwe ruzivo: http://en.opensuse.org/Portal:Tumbleweed
Tinogona zvakare kuwedzera iyo Packman repository kana iko kugovera kwagadziriswa (kwakurudzirwa):
zypper ar -f -n packman-essentials http://packman.inode.at/suse/openSUSE_Tumbleweed/Essentials/ packman-essentials
uye gadziridza zvese ne:
zypper kumusoro zypper kuisa-nyowani-inokurudzira zypper dup
Kwaziso kubva ku linuxeros :).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » vhuraSUSE Tumbleweed yakagadzirira kurodha Iyo Rolling Kuburitswa !!!
Kwete kubva kuBrooklyn akadaro
Zvese zvaunotaura nezve akasiyana "mafirita" eOpenSUSE zvaive zvechokwadi kusvika nguva pfupi yadarika. Tubleweed neFekitori izvozvi zvakafanana. Ini handizive kana iyo Tubleweed repositori inonongedza kuFekitori kana imwe nzira yakatenderedza.
Kuunza iwo matavi maviri pamwechete chisarudzo chakaitwa nechikwata cheSUSE nguva pfupi yadarika.
Pindura kuna NotFromBrooklyn
Hongu, asi vakazvidzorera kubva zita rekuti Tubleweed raizivikanwa zviri nani. Iyo Tubleweed chirongwa chakagadzirwazve sezvazvakaitika mwedzi nehafu yapfuura neFekitori uye pana 4.11.2014 nyowani Tubleweed repo ine iso inosanganisirwa yakaonekwa. Haisisiri repo sepakutanga. Fekitori ichave chete yekuvandudza mbishi saka ichave isina kugadzikana. Idzo 2 mazuva ekare nhau.
Mamwe mashoko: http://es.opensuse.org/Portal:Tumbleweed
David Pineda akadaro
Mhoro shamwari, unoziva ndine mubvunzo, kubva pane zvandakaverenga, iyo vhezheni yefuseuse yaizove yakagadzikana kuburitswa kuburitswa uye tumbleweed yaizonyangarika nekuti zvaizofanana neyakavhurwa fekitori ...
Ndeupi musiyano izvozvi pakati pefekitori uye tumbleweed?
Pindura kuna David Pineda
Mhoro @David Pineda,
Kubva munaNovember 4 iko chete kuburitswa kwe openSUSE ndeye Tubleweed. Fekitori inoitirwa kusimudzira kunoshanda kweiyo distro saka haina kugadzikana kushandiswa kwezuva nezuva.
Kubva munaNovember 4, kubhururuka kweTubleweed kwakabatana neFekitori kutenderera, kuchisiya chete Tubleweed kutenderera uye pasina Kupeta kweFekitori.
Vanoiisa muzviziviso zvepamutemo.
»Musi waNovember 2014, XNUMX, iyo fekitori ichipidigura uye Tumbleweed rolling shanduro dze openSUSE dzakabatanidzwa kuita imwechete yakavhurikaSUSE Tumbleweed rolling kufona.»
“Chero ani anoshandisa openSUSE Fekitori uye akavhuraSUSE Tumbleweed pamberi paMay 2015, 2015 anofanirwa kutevedzera rairo iri papeji rino. Vashandisi veTumbleweed vanofanirwa kuzviita nekukasira kuti varambe vachigamuchira zvigadziriso. "Vashandisi vefekitori vane kusvika musi waMay XNUMX, XNUMX kuti vadaro."
Mamwe mashoko: https://en.opensuse.org/SDB:Tumbleweed_Merger
Ndatenda Petercheco. Kuverenga chirevo chako kwajekesa zvese izvo kufamba.
Ikozvino Tumbleweed ndiyo yaimbove iri Fekitori Ruzhinji Bvunzo. Asi, Tumbleweed ichiri chikamu cheiyo fekitori purojekiti, ndiko kuti, ichiri isina kunyatsogadzikana vhezheni, saka iwe unowana mamwe mabugs. Iyo fekitori purojekiti zvino inovhara: Tumbleweed, Fekitori-kuyedza, openqa uye ese mapurojekiti akaparadzaniswa uko OpenSUSE inogadzirwa, pakati pezvimwe zvinhu.
Jos Poortvliet naRichard Brown vakazvitsanangurira zvakanaka: D.
Ini ndakaenda kunzvimbo yeTumbleweed repository zvinoenderana nemirairo yakapihwa pano uye zvinoita kunge yakagadzikana, kusanganisira madhiraivha eiyo yekare Nvidia mifananidzo. Mubvunzo wandinayo ndewekuti ndichazokwanisa here kuwedzera zvinyorwa zvandaive nazvo kare. Ini ndinofunga chinhu chakaomesesa kunzwisisa muSUSE inyaya yezvinyorwa uye zvavanokoshesa. Zvino kana zvasvika pakuisa chimwe chinhu zvinoita sekunge yakajairika repositi umo kurodha pasi kunoitwa: "Vhura SUSE-20141102". Zvese zvinondishandira kusara kweA Audacious, saka ndinoronga kuzvisiya sezvazviri. Ichokwadi ndechekuti kune newbie zvese izvi ndezvechokwadi gibberish, asi ini ndinofunga kuti pakombuta yangu chinhu chakanakisa kuve neRolling Release uye isu tichaona maitiro azvinoita mune ramangwana.
Kutenda nemipiro yako Peter uye nezvakanakisisa
Mhoroi, nevechitatu-bato repos, unogona zvirokwazvo kuvaisa sezvo ivo vese vachiwanzo kuve neTumbleweed kana Factory bazi. Kazhinji, iwe unongofanirwa kutsvaga padandemutande kuti uwane software.opensuse.com yepakeji iwe yaunoda uye repo yekuwedzera ichaonekwa.
Pablo Honorato akadaro
Kugumburwa = Kutenderera
Fekitori = Yechokwadi Kutenderera?
Tumbleweed = Kuedzwa
Fekitori = Sid
(kana zvirizvo zviri pachena kare)
Pindura kune distrozao
Ndatenda nekundivhenekera nehungwaru hwenyu.
Kunyanya, iyo "kuve (sic) hongu (sic) nekudaro yakajeka kare" ndeyezvakawanda.
Fekitori chirongwa, kwete kuburitswa saizvozvo. Tumbleweed. ikozvino, inopinda inogona kunge iri Fekitori, ndiyo fekitori vhezheni iyo munhu wese anogona kushandisa, sezvo yakapfuura nemuyedzo yakati wandei. Pamberi peTumbleweed pane Fekitori-kuyedza uye pamberi pemapurojekiti akati wandei akapatsanurwa. Saka mapurojekiti aya, kana agadzikana, anouya pamwechete kuumba Fekitori-Ku-Bvunzo, iyo mushure mekuedzwa kwakaitwa neOpenQA inova Tumbleweed. Izvo chaizvo zvakati omei kupfuura izvi, asi zvinonyatsotsanangurwa pane iro OpenSUSE peji
Uye ini ndaingofanirwa kuburitsa Fekitori uye nekuisa Manjaro nekuti systemd yakawandisa tembiricha yangu .. Pane nzira here yekubvisa zvachose kuvhuraSUSE iyo inosemesa systemd uye kuisa openRC kana chimwewo chinhu?
Manjaro inoshandisa systemd…
Asi zvirinani kuti iwe unogona kuibvisa uye kuisa openRC oo
Kuteedzera gwara rako, izvozvi yangu OpenSUSE 13.2 inoshanda OK, uye nekumhanyisa kumhanya, iine Tumbleweed repositories.
Ini ndinogadziridza nenzira yakatsanangurwa pano ndichimirira ekupedzisira marekodhi.
Nekudaro, muYast> Software repositories, inotevera dura rinowanikwa:
Iwe unogona here kujekesa kuti ndeupi rudzi rwechinyorwa ichi uye kana chiri chenguva pfupi uye chenguva pfupi repositi?
Kutenda neruzivo uye kwaziso
Ehe, iyi ndiyo nzvimbo yekuchengetera bazi razvino reTumbleweed ... Vanoiisa nemazuva ekuburitswa kubva pamufananidzo wekupedzisira :).
inovhura Tumbleweed mwedzi mina mushure mekuburitswa kwayo izere vhezheni
bhagi, kupunzika uye kuparara gadzirisa zvigadziriso
gondohwe kushandiswa kwekushandisa
inogadziridza ye Hardware, software, uye chirongwa chisingaenderane
openSUSE 13.2 inowanikwa + post-yekuisa gwara !!!
Tsvaga mameseji muaccount account